Four top tip to get better communication with your kid by saipanpha | Steem
Four top tip to get better communication with your kid by saipanpha
myanmar · @saipanpha · May4'19 (edited)
Four top tip to get better communication with your kid
သင့်ကလေးနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု့ ကောင်းရေးအတွက် နည်းစနစ် (၄) ခု
ဆက်ဆံကောင်းဖို့အတွက် သင့်ကလေးနဲ့ အတိုက်အခံလုပ်တာ၊ အော်ငေါက်တာ၊ အပြစ်ပေးတာတွေ မလုပ်သင့်ပါဖူး။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆိုတာ လေ့လာသင်ကြားပေးရမယ့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ဆိုတာကို သင်ကြားပေးပြီး ပျိုးထောင်ပေးရမှာပါ။
၁. သင့်ရဲ့ ကလေးကို ဒေါသတကြီး အော်ငေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
သူတို့လေးတွေက စကားကို ဘယ်လိုအော်ပြောရမယ်ဆိုတာကို သင့်ဆီကနေ သင်ကြားပြီး သင့်လိုပဲ သူ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြန်သုံးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုလည်း အလိုမကျတဲ့အခါ သင်ပြုမူခဲ့သလို သင့်ကိုပြန်ပြီး အော်ငေါက် ဦးမှာပါပဲ။ သူတို့ရဲ့  အနာဂတ်မှာလည်း အခြားသူတွေကို လွမ်းမိုးချင်တဲ့အခါမှာ သူ့ကိုလိုက်လျောစေချင်တဲ့ အခါတိုင်း အသံကျယ်လောင်စွာနဲ့ အော်လိုက်ပြီး သူ့ အစွမ်းကိုထုတ်ပြပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးချုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် သူတို့ အမြင်နဲ့ သင်ကြားခဲ့ရတာကို သူတို့လေးတွေ မှတ်သားထားတာပါ။
၂. တကယ်လို့ သင်က ကလေးကို စိတ်ဆိုးတဲ့လေသံနဲ့  “မလုပ်ရဖူး ရပ်လိုက်” လို့ ခဏခဏပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်
ဒီအချိန်မှာ သူတို့လေးတွေက ဘယ်လိုပြန်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကို သူတို့ မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာ မှတ်သားထားပြီး လက်ခံထားမှာက သူတို့လိုချင်တာ မဟုတ်တဲ့အချိန် ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ တစ်နည်းပြောရရင် ဟန်ဆောင်အတုခိုးတာပေါ့ဗျာ။ အတုခိုးရုံတင်မဟုတ်ပါဖူး ပြန်လည်အသုံးချဦးမှာပါ။ သူတို့အလိုမကျလာတဲ့အခါ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ ပြန်ဆက်ဆံမှာပါ။ ဒါကြောင့် စံပြဖြစ်တဲ့ ဖေဖေ မေမေ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် အတူနေမိသားစုနဲ့  ဆရာ၊ ဆရာမ တွေဟာ ကလေးတွေရှေ့မှာ အရမ်းကို သတိထားဖို့ လိုတာပါ။
၃. သင့်ဟာ မလုပ်ရဖူး ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုပဲ အမြဲပြောနေခဲ့မယ်ဆိုရင်
မလုပ်ရဖူးဆိုတဲ့ စကားက သုံးစားမရတဲ့စကားလုံးဖြစ်သွားမှာပါ။ ဆက်တိုက် ငြင်းဆိုခြင်းဟာ ကလေးရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မလုပ်ရဖူးဆိုပြီးပိတ်ပင်တာထက် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ အပြုအမူတွေကို ပိုပြီးသုံးနူန်းပြောဆို လုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ သူတို့လေးတွေရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်လေးစားမှု့ဟာ အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ သူတို့လေးတွေရဲ့ စွမ်းရည်က ဘယ်ဟာကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆုိုတာကို လေ့လာဖို့ပါ။ တကယ်လို့သင်က မလုပ်ရဖူးပဲပြောနေမယ်ဆိုရင် သူတို့လေးတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေဘယ်လို မြင့်မားလာပါ့မလည်း။ ဒီတော့ မလုပ်ရဖူးဆိုတဲ့ စကားလုံးက ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသင်ကြားတဲ့အခါမှာ အတားအဆီးတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလိုဆိုတော့ မပြောရတော့ဖူးဆိုလားဆိုတော့ တစ်ချို့ ဘေးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတော့ ပြောရမှာပါ။ မလုပ်ရဖူးဆိုတာထက် လုပ်ရင်ဘာဖြစ်နုိုင်တယ်ဆိုတာကို အသေအချာရှင်းပြတာက ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းပါ။
၄. သင့်က အမြဲတမ်း အေးအေးဆေးဆေး နေဖို့ ကြီးပဲပြောနေမယ်ဆိုရင်
ကလေးက ဘာဖြစ်မလည်းဆိုတော့ သူတို့လေးတွေရဲ့ မျက်တောင်လေးကို မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် လေးနဲ့ မဖြေချင်တဲ့ အမူအရာ သို့မဟုတ် ၀မ်းနည်းဟန်ဆောင်တာကိုပဲ သင်ပြန်ရရှိမှာပါ။ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နာလေးနဲ့  စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ် မျက်လုံးလေးက သူတို့ဖြစ်ချင်တာလေးကို ခွင့်ပြုဖို့ အသနား ခံနေတာကို သင်တွေ့ရဦးမှာပါ။ သင်ပြောတဲ့ စကားက လိုရင်းကိုမရောက်ပဲ လွဲနေတာကို သင်တွေ့ရဦးမှာပါ။ ကလေးဘ၀က ဆော့ကစားမှာ သူတို့လေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဦးနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဘေးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို ဖေဖေ မေမေတို့က ကြိုတင်ဘေးမဖြစ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးပြီး ပေးဆော့တာဟာ ပိုပြီးကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်မှာပါ။
Translated by @saipanpha
👍 curie, sbi2, tombstone, camelot, domelay, vact, wackou, ansoe, hendrikdegrote, tinhlaingoo, komoezaw, htwegyi, asterkame, billionairehein, myintlwinsoe, sawlwin, uthantzin, zinminhtet, aunggyi100, electrodo, caesarsupaimin, hotsteam, mmunited, yaelg, diebaasman, rival, locikll, autobodhi, nicephoto, tensor, didic, drmake, reaverza, pinksteam, allcapsonezero, jiujitsu, revo, combatsports, blewitt, bluemoon, liberosist, haldunea, athererer, housi0, zayam, iansart, javier.dejuan, stahlberg, zipporah, oghie, mammasitta, aboutyourbiz, lk666, whoib, cryptokrieg, ascorphat, neumannsalva, lekang, scrawly, ilovecryptopl, ivan-g, skycae, wales, hanobooy, and 70 others
"Four top tip to get better communication with your kid"
wackou0B 42,311,816,421 0.72%
tombstone0B 117,785,837,164 0.48%
lola-carola0B 193,746,376 1.2%
anwenbaumeister0B 80,885,032 2.4%
mammasitta0B 425,521,661 0.12%
liberosist0B 594,570,815 2.4%
psygambler0B 115,183,642 1.2%
lk6660B 416,826,720 1.2%
whoib0B 415,965,459 70%
curie0B 748,337,312,464 2.4%
hendrikdegrote0B 31,189,517,183 2.4%
vact0B 45,350,769,972 2.4%
dashfit0B 222,072,026 1.2%
gmedley0B 141,129,703 1.2%
camelot0B 54,315,416,912 100%
diebaasman0B 2,357,662,598 12%
moksamol0B 221,246,930 1.2%
iansart0B 516,115,046 1.2%
jiujitsu0B 914,754,128 1.2%
lekang0B 305,092,883 1.2%
zerotoone0B 178,989,012 1.2%
locikll0B 1,895,832,789 4.8%
aboutyourbiz0B 416,870,521 2.4%
cryptokrieg0B 409,093,155 2.4%
rival0B 2,296,334,877 2%
tensor0B 1,348,302,045 1.2%
caesarsupaimin0B 4,099,415,280 50%
domelay0B 48,430,393,593 100%
flatman0B 99,143,171 2.4%
komoezaw0B 23,636,461,381 100%
allcapsonezero0B 1,111,771,048 1.2%
bluemoon0B 601,430,707 2.4%
hotsteam0B 3,404,979,428 10%
neumannsalva0B 321,175,093 1.2%
ansoe0B 36,567,658,763 100%
asterkame0B 18,978,294,799 100%
aungzawhtwe0B 72,758,702 100%
tinhlaingoo0B 25,600,755,696 100%
revo0B 879,830,322 1.2%
eurodale0B 79,064,943 1.2%
reaverza0B 1,195,844,218 15%
clweeks0B 73,028,087 1.44%
htwegyi0B 21,280,109,075 76%
dokter-purnama0B 120,912,178 1.2%
jlsplatts0B 110,169,605 0.36%
zinminhtet0B 5,123,217,486 75%
joendegz0B 123,823,776 1.2%
pinksteam0B 1,118,082,559 10%
paulmoon4100B 69,503,293 10%
teukurival0B 90,774,830 1.2%
drmake0B 1,270,006,450 1.2%
skycae0B 272,684,558 2.4%
xanderslee0B 90,389,172 2.4%
kenadis0B 231,720,661 1.2%
danaedwards0B 210,060,300 2.4%
gordon920B 120,857,466 1.2%
stahlberg0B 500,765,135 1.2%
gabrielatravels0B 119,001,802 0.6%
reizak0B 164,143,805 0.96%
zlatkamrs0B 95,918,996 2.28%
uthantzin0B 6,979,608,430 100%
sawlwin0B 9,605,003,104 50%
shinedojo0B 223,457,188 2.4%
billionairehein0B 12,906,618,173 50%
trixie0B 72,566,877 10%
didic0B 1,338,931,820 1.2%
operahoser0B 140,842,094 0.36%
aunggyi1000B 4,267,430,377 100%
myintlwinsoe0B 9,918,680,807 100%
oghie0B 453,287,576 50%
ivan-g0B 276,264,963 1.2%
jamunawng0B 246,894,001 50%
zipporah0B 483,332,941 0.48%
cryptofuwealth0B 96,025,903 11%
ambitiouslife0B 106,357,774 1.2%
smiing110B 247,679,457 50%
jingis070B 69,657,667 1.2%
sbi20B 265,466,816,632 48.18%
wales0B 253,865,012 1.2%
glorialion0B 246,896,043 50%
golden-myanmar0B 246,894,001 50%
thinzarnyinyi0B 246,896,043 50%
misia19790B 186,400,173 1.2%
liongyi0B 247,492,235 50%
gracelbm0B 89,174,881 1.2%
cryptocopy0B 104,102,698 1.2%
longer0B 190,176,976 50%
blewitt0B 744,553,635 0.16%
kafupraise0B 41,726,366 34%
scrawly0B 296,323,185 2.4%
ilovecryptopl0B 293,651,115 1.92%
yomismosoy0B 210,807,855 50%
bflanagin0B 176,150,985 1.2%
yestermorrow0B 182,207,001 0.72%
hansmast0B 148,545,202 1.2%
wstanley2260B 61,088,096 50%
yaelg0B 2,372,971,954 5%
tommasobusiello0B 73,162,326 1.2%
clement.poiret0B 104,653,417 2.4%
sasansam0B 246,894,001 50%
annaabi0B 126,843,613 1.2%
plo0B 247,705,278 50%
desg0B 247,703,230 50%
nrlio0B 247,705,278 50%
pcwor0B 247,705,278 50%
soulkeeper0B 247,705,278 50%
joot0B 246,309,281 50%
monst0B 247,705,278 50%
snowred0B 247,705,278 50%
phantomassassine0B 247,705,278 50%
jacklin190B 247,705,278 50%
hoverbooker0B 247,703,230 50%
naruhokage0B 247,705,278 50%
hanobooy0B 247,705,278 50%
trang0B 188,430,681 1.2%
antigourmet0B 58,624,934 1.2%
chickenmeat0B 107,745,272 1.2%
javier.dejuan0B 502,018,547 2.4%
mmunited0B 2,574,586,502 49%
zayam0B 543,930,256 100%
reverseacid0B 163,827,239 1.2%
ambercookie0B 67,800,802 90%
alvin06170B 162,591,943 1.2%
autobodhi0B 1,689,462,252 100%
ascorphat0B 341,371,135 2.5%
combatsports0B 799,252,448 2.4%
electrodo0B 4,175,135,781 1.2%
lorasia0B 109,269,584 50%
chrisluke0B 105,691,280 26%
nicephoto0B 1,360,783,568 1.92%
athererer0B 551,649,716 100%
@domelay · May4'19
ဟားးး ခေးလေးတောင်လိုချင်သွားပြီ ။
@saipanpha · May 10 '19
လုပ်လိုက်တော့ ကိုဒွန် :P
domelay0B 5,646,086,005 13%
@ansoe · May5'19
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ကျွန်တော်နောက်ပိုစ့်တွေမှာ အကောင်းအဆိုးတွေပါ ထည့်ရေးပေးပါ့မယ်။